Inona ireo fahafahana hanaraka backlinks?
Amin'ny ankapobeny, ny rohy tafiditra ao dia misy URL mavitrika amin'ny tranonkala iray hafa fa tsy ny mitondra ny mpampiasa hiverina any amin'ny tranokalanao raha tsindrio. Ny mombamomba azy eo amin'ny backlink amin'ny teny dia ny fanangonana ny fanamarihana rehetra avy amin'ny aterineto izay manondro ny sehatra misy anao. Ny kalitao sy ny mombamomba ny tsenan-tsenan'ny lamosinao dia afaka manatsara ny lozam-pifaneraseran'ny vohikalanao ary mitondra fifamoivoizana amin'ny tanjonao. Ary ny andininy mifamadika amin'ny rohy malaza amin'ny tranonkala spammy izay tsy manaraka ny toro-lalana Google dia mety handrava ny ezaka fanatsarana ny fikarohana sy hitarika ny fialan-tsasatra.
Araka ilay sariitatra Google Penguin vao haingana, ny rindran-kihezan-tsavily madinidinika rehetra avy amin'ny tranonkala spammy dia tsy maintsy ho levona, ary ireo tranonkala izay nirotsaka tamin'ity hetsika hosoka ity dia mila saziana. Google dia tsy misy afa-tsy ireo backlinks izay avy amin'ny tranonkala spammy, ambany kalitao, lahatsoratra matoan-dahatsoratra an-tsoratra, fanamarihana bilaogy, na toeram-pambolena rohy.
Toerana hita ny rohy tafiditra ao amin'ny rohy
Ny safidy malalaka dia manome ny tompon'ny tranonkala miaraka amin'ireto data manaraka ireto - lisitry ny URL backlink, endritsoratra ireo rakitra ny isa nomen'izy ireo.
Na izany aza, raha vonona ny handoa vola amin'ny fitaovana fananganana fitaovana fampifandraisan-tserasera ianao, dia omena ireto sampan-draharaha manaraka ireto ianao, ankoatra ireo tatitra etsy ambony: fanamboarana sarotra sy antsipirihany, fanarahamaso ny fiverenan'ny rindran-kira, Famaritana ny lahatsoratra fanamarinana pejy manondro pejy samihafa ao amin'ny tranokalanao, fampahafantarana momba ireo rohy hafahafa ivelany, misy karazana fahefana fanampiny, sy ny sisa.
Be dia be ny fananganana tranonkala fananganana rindrambaiko manome ny mpanjifany amin'ny fotoam-pitsapana maimaim-poana (f. f. Semalt digital company). Manome fahafahana hanamarina ny kalitao amin'ny serivisiny izy ireo ary hanapa-kevitra raha mendrika ny sainao izany na tsia. Azonao atao ny mifidy sidina izay hanome fahafaham-po ny filan'ny orinasa sy ny teti-bola izay tena ampiasain'ny tolotra fanorenana ny rohy dia afaka manome anao fomba fijery sarobidy maro ary hanatsarana ny dingan'ny fahazoana fifandraisana tsara amin'ny sehatra.
Ireo fitaovana izay hanampy anao hanaraka backlinks
Ity fitaovana ity dia manome tolotra maimaim-poana sy aloa. Ny serivisy maimaim-poana dia tsy maka fotoana lava ho an'ny backlinks mba hitsangantsangana. Hanamarina ny findainao voalohany an'arivony. Raha mila famotorana bebe kokoa ianao, dia tokony mitady fomba hafa hahitana ny backlinks rehetra. Ity serivisy ity dia hanome anao ny tatitra ofisialy izay ahitana ny URL an'ny pejy izay mametraka ny rohy mankany amin'ny tranokalanao, ny lahatsoratra fanamarihana ny rohy, ny sehatra manan-danja hafa (PageRank sy OBL). Ny "Fitaovana Backlinks rehetra" dia hampiseho anao ireo tranonkala izay manondro ny sehatra na ny votoatinao. Ankoatra izany, azonao atao ny manamarina ny toerana nametrahana ny marika.
. Ohatra, ny volana voalohan'ny asa fananganana rohy dia $ 0,99. Mandritra ity fotoam-pitsarana ity dia mahazo fahafahana misafidy ny teny fanalahidy manan-danja amin'ny SEO fampiroboroboana, fanentanana fanentanana fananganana rohy, ary hahazo fanohanana amin'ny mpitantana. Raha te-hahazo bebe kokoa ianao dia tokony handoa $ 99 ho an'ireo volana manaraka. Ho an'ity vola ity dia hahazo tolotra maromaro isan-karazany izay ahitana ianao:
Lisitry ny fanamafisana ny lisitry ny lisitry ny lisitry ny lisitry ny lisitry ny lisitry ny lisitry ny lisitry ny lisitry ny lisitra;
Fampivoarana ny fananganana fananganana fananganana fananganana fanorenana mifototra amin'ny vokatra azo trandrahana sy ny lisitry ny teny fikarohana;
Fampiharana ny tolo-kevitra avy amin'ny tatitra ary famahana ny fahadisoana rehetra misy eo amin'ny tranonkala iray Source .